ကျိန်ခြင်းနှင့် ကောင်းကြီးပေးခြင်း - ဆိုး
ဆိုး - ညစဉ်ခွန်အား
ကောင်းကင်ဘုံကို တိုင်တည်၍ မကျိန်ကြနှင့်၊ မြေကြီးကိုတိုင်တည်၍ မကျိန်ကြနှင့်။ ထိုမှတပါး ဘယ်အကျိန်မျှ မကျိန်ကြနှင့်။ (ရှင်ယာကုပ်သြ၀ါဒစာ ၅း၁၂)
တကယ်တော့ ကျွန်တော့မှာ အထင်ကရ ပြောစရာအရည်အချင်းကောင်း တစ်ခုမျှ မရှိခဲ့ပါဘူး ဟု ပြောရမှာပါ။ ငယ်စဉ်က စာမတော်လို့ ဆုလည်းမရဘူးပါ။
Read more: ကျိန်ခြင်းနှင့် ကောင်းကြီးပေးခြင်း - ဆိုး
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း (အီစတာ) စာလွှာပေးပို့ခြင်း
နိဒါန်း။ ။ တစ်နေ့သ၌ သင်္ချာပညာချွန်ကျောင်းသားတစ်ဦးက ဘုရားရှိမရှိ၊ တွေးတော၊ဆင်ခြင်ကြည့်သည်။
လူမြောက်များစွာသည် ဘုရားရှိသည်ဟု ယုံကြည်ပြီး၊ အခြားများပြားလှသောလူများသည် ဘုရားကိုမယုံပါ။ ဘုရားက လူနှင့်အလုံးစုံတို့ကို ဖန်ဆင်းထားသည် ဆိုသည်ကိုလည်း မယုံပါ။
Read more: ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း (အီစတာ) စာလွှာပေးပို့ခြင်း
ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြု လစဉ်စာစောင် May-2011
လောကကို အောင်မြင်ခြင်း သည်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှုတ်ကပတ်တော်က ဖေါ်ပြအသိပေးပါသည်။ လောကကို အောင်မြင်ခြင်းသည် အသိပညာ၊အတက်ပညာ၊ကာယစွမ်းအားဟု မပြောပါ။ အကြောင်းမှာ ပညာ၊ စွမ်းအင်၊ သတ္တိတို့သည်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကွာစမြဲဖြစ်သည်။မတူနိုင်ပါ။ ဤသည်မှာ လောကဓမ္မတာတရားဖြစ်၍ပြင်မရပါ။ လောက၌ ဖွားသန့်စင် ဝင်ရောက်လာစကတည်းက ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးလိင်ခြားမှုကပြင်မရ၊ ရွေးလို့ရသည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အတူ လယ်သမား သားသမီး၊ သူဌေးသူကြွယ်သားသမီး ကွာကြသည်။ သူကြွယ်သားသမီးများက ငွေရှိ၍ သားသမီးများကိုပညာပေးပြီး ပညာကြောင့် လောကကို အောင်ပါက အခြားသူများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ၊ပညာနည်းသူများ၌မျှော်လင့်စရာ မရှိပေ။
Read more: ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြု လစဉ်စာစောင် May-2011
ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ အနှစ်ချုပ် ပညတ်တရား၂ချက်
နေ့စဉ်ခွန်အား May 2, 2011
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ တို့ကြောင့် သင်စိတ်ရှုပ်၊ စိတ်ဖိစီးဖူးပါသလား၊ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပါ ပညတ်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်အပြင်၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ ထပ်လောင်းပြဌာန်းထားသော ပညတ်များစွာကို ကြိုးစားစောင့်ထိန်းရသူ၊ ဂျူးလူမျိုးများကို ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါ။ သို့ဖြစ်၍
Read more: ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ အနှစ်ချုပ် ပညတ်တရား၂ချက်
တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက် - မင်းအောင်သက်လွင်
အဲဒီနေ့က ကျွန်တော် ညဂျူတီ ဆင်းနေရပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အလုပ်သမား အက်ဥပဒေအရ ညဘက်မှာ ညဂျူတီဆင်းတဲ့ သူတွေဟာ အနည်းဆုံး အလုပ်သမား နှစ်ယောက် အလုပ်လုပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါမှ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကူအညီ ပေးနိုင်အောင်လို့ပါ။ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်တဲ့
Read more: အမှောင်ကျခြင်း
Holy Spirit come on glory and praise of Jesus Christ.
အားလုံး ကျမ်းစာအုပ်ကိုယ်စီပါကြမှာပါ။ ကျမ်းပိုဒ်တွေကို ပိတ်ကားပေါ်ထိုးပြမှာ ဖြစ်သော်လည်း မိမိကိုယ်ပိုင် ကျမ်းစာအုပ်နဲ့ ဖတ်စေလိုပါတယ်။ ကျမ်းစာအုပ်မပါလာသူများလည်း ဘေးကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ မျှဝေဖတ်ရှုကြပါ။
Read more: ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ စကားကြီး၇ခွန်း
http://murann.com/images/metta.pps (0.5MB download) ၁ငါသည် လူဘာသာစကားကို၎င်း၊ ကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကို၎င်း၊ ပြောနိုင်သော်လည်း မေတ္တာမရှိလျှင် အသံမြည်သော တံပိုးခရာကဲ့သို့၎င်း၊ တီးတံကိုသာပေးတတ်သော လင်းကွင်းကဲ့သို့၎င်း ဖြစ်၏။ ပရောဖက်ဥာဏ်ကို ငါရ၍၊ နက်နဲသောအရာ ရှိသမျှတို့နှင့်
Read more: ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း
ဦးတင်မောင်ထွန်း၏ တရားဟောချက်များ (ညီအစ်ကိုများအသင်းတော် - ရန်ကုန်)
ဦးတင်မောင်ထွန်း (Rev. Dr)
ရန်ကုန်မြို့ ဟေဗြုန်ခရစ်ယာန်လူငယ်များအသင်းတော်၌ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ကျွန်တော်ဟောကြား ဝေငှသည့်တရား ဒေသနာတော်များကို၊ မူလအစက ကက်ဆက်တိတ်ခွေနှင့်အသံဖမ်းယူထားပြီး၊ လိုအပ်သူများအား ပြန်လည်ကူးယူစေခြင်းဖြင့် ဓမ္မဒါနပြုခဲ့ပါသည်။
Read more: ဦးတင်မောင်ထွန်း၏ တရားဟောချက်များ...
ဆောင်းပါး - မင်းအောင်သက်လွင်
မိုက်ကယ်ကို ကျွန်တော် သိတာ ၁၃ နှစ်ရှိသွားပါပြီ၊ ကျွန်တော် ကသာ သူ့ကို သိတာပါ သူက ကျွန်တော့်ကို မသိပါဘူး၊ ကျွန်တော်ကဘဲ သူ့ကို တဘက်သတ် သိနေတာပါ၊ မြန်မာပြည်မှာ နေတုံးက သူ့နာမည်၊ သူ့ဓါတ်ပုံကို ရုပ်ရှင် မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ တွေ့ဖူးပါတယ်၊ သူ့အသံနဲ့ ဆိုဟန်၊ သူ့ လှုပ်ရှားမှု ကကွက်
Read more: ကျွန်တော်နှင့်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်
ထိုသားတော်သည် မျက်မြင်မရသော ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန် တော် ဖြစ်၏။ ကောလောသဲ ၁း၁၅
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင် ပါဝင်သော ဂရိ စကားလုံး အီကွန် (eikon) (ပုံ သဏ္ဍာန်တော်) သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း လောကတွင် အသုံးများသော
Read more: ခရစ်တော်၏ရုပ်ပုံလွှာ-၅
သိပ်မကြာသေးခင် ကာလများကပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ရဲ့ ယောက္ခမ နဲ့ မိခင်ဖြစ်သူတို့ စင်္ကာပူကို အလည်လာ နေထိုင်တာ တနှစ်လဲ ပြည့်ရော မနေနိုင်တာနဲ့ နေရင်းဌာနီ မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားကြတယ်။ စင်္ကာပူကို လာလည်ကြတဲ့ မိခင်၊ဖခင်၊ယောက္ခမ စတဲ့ အသက်ကြီးရင့်သူများဟာ စင်္ကာပူမှာ လွန်ရောကျွံရော နှစ်နှစ်ထက်ပိုလို့ မနေနိုင်ကြပါဘူး။ တနှစ်လောက် စင်္ကာပူမှာ နေလာကြပြီဆိုရင်ပဲ ဖင်တကြွကြွနဲ့ ပြန်လို့ရမဲ့ အခွင့်အရေးကိုသာ မျှော်နေကြတတ်တယ်။ အကြောင်းပြချက်ကလေး တခုခုရပြီဆိုရင်ဖြင့် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပြန်ကြတော့တာပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိခင်က ”သား။ အမေ့သမီးတွေ စီးပွားရေး အဆင်မပြေဘူးကြားတယ် ။ ဗမာပြည်မှာ ဘယ်လိုနေကြသလဲ မသိဘူး။ ပြီးတော့ ဗမာပြည်မှာ အမေဧ၀ံဂလိ လုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်။အမေပြန်မှ ဖြစ်မယ်သားရဲ့။” လို့ ဆိုလာတော့ ကျွန်တော်လည်း မတတ်သာတော့ပဲ အမေ့ဆန္ဒကို လိုက်လျောပြီး ပြန်လွှတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်။ အမေက ဒီလိုအကြောင်းပြပြန်ဖို့ ပြောတာမှ သိပ်မကြာသေးဘူး၊ ယောက္ခမဖြစ်သူကလည်း တစခန်းထလာပါတော့တယ်။ ”ဖိုးခွား။ မင်းအပါး(ယောက္ခထီး) ဗမာပြည်မှာ တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ရတာ နေထိုင်မကောင်းဘူး ကြားတယ်။ အန်တီလည်း မပြန်မဖြစ် ပြန်ရလိမ့်မယ်။” ဆိုလာပြန်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း မတတ်သာတော့ပဲ မိခင်ဖြစ်သူကော ယောက္ခမပါ ဗမာပြည်ကို ပြန်လွှတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ စင်္ကာပူမှာ ကြာကြာမနေနိုင်လို့ သူတို့တတွေ ပြန်သွားကြတာ အဆန်းမဟုတ်ပေမဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုအတွက်တော့ ဒုက္ခပင်လယ် အတော်လေးဝေသွားတယ်။
Read more: ကျွန်တော်နံပါတ်ဝမ်း
ယနေ့ကာလ၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်နေ့တခြား သဘာဝဘေးဒဏ်များ တဖြေးဖြေး ပိုမိုများပြားလာလျက် ရှိပေသည်။ မတ်လ(၁၁) magnitude (၉)အင်အားရှိ ပြင်းထန်သော မြေငလျှင်နှင့် ဆူနာမီရေလှိုင်းကြောင့် လူ၊ နေအိမ်၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ယာဉ်များပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊ အဏုမြူစွမ်းအင်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများ ထိခိုက်ကာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွရောင်ခြည် အန္တရာယ်များသည်၎င်း၊ မတ်(၂၄)မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနယ်စပ်ဒေသ၌ ၆.၈ မြေငလျှင်ကြောင့်၎င်း စိမ်မချမ်းမြေ့စရာသတင်းများကိုကြားသိရပါသည်။ လူအများကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ကြသည်။
Read more: ´´စိုးရိမ်စိတ်ကို အစားထိုးရန်နည်းလမ်း´´